အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေတွင် အားနည်းချက်များရှ?? - Yangon Media Group
အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေတွင် အားနည်းချက်များရှ??
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂- မြန်မာနိုင်ငံတွင်အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများကို အပြည့်အဝရှုတ်ချရန်လိုအပ်ပြီး ပြဋ္ဌာန်းထား သည့် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မတွင် အားနည်းချက်များရှိနေကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရွှေရွှေစိန်လတ်က ပြော သည်။
ရန်ကုန်မြို့၊ Yangon Book Plaza တွင် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ ကပြုလုပ်သည့် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်ရေး ဥပဒေ တစ်ရပ်အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ရေး စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ၄င်းကအထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ မုဒိမ်းမှုရာဇ သတ်ကြီးပုဒ်မမှာကိုက အားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်။ ဒီဥပဒေမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အချက်တွေထဲမှာ ထိုးသွင်းမှုမြောက်မှ အမှုမြောက်တယ် လို့ဆိုထားတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ဇနီးမောင်နှံအချင်းချင်း အလိုမတူရင်တောင် မုဒိမ်းမှုမြောက်တယ်။ နောက်ပြီးအမျိုးသမီး တွေအပေါ် ဘယ်လိုအပြုအမူမျိုးတွေက အကြမ်းဖက်မှုမြောက် တယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေသိပြီး ရှုတ်ချဖို့လိုပါတယ်”ဟု ¤င်းက ပြောသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ကာကွယ်ရေးဥပဒေ တိတိကျကျမရှိသေးသော်လည်း ရှိနေသည့် ဥပဒေကို ထိထိရောက်ရောက်အကောင်အထည်ဖော်ရန် လိုအပ် ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
”ဥပဒေအခိုင်အမာမရှိရင်တောင်မှ အပိုင်းသုံးပိုင်းလုပ်လို့ရ တယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ဥပဒေကို တရားမျှတစွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ကို အစီအမံတွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ ဥပမာ- တရားရုံးက တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တဲ့အမိန့် ကြေညာစာ တွေထုတ် ပြန်လို့ရတယ်။ ဒီလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ပြီး ဘယ်လိုစစ်ဆေးပါဆိုပြီး ကြေညာစာထုတ်လို့ရတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရက အကောင်အထည်ဖော်လို့ရတယ်။ တိုင်း ဒေသ ကြီးမှာရှိတဲ့ တရားသူကြီးချုပ်တွေ၊ ဥပဒေချုပ် တွေက သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေက ကြေညာချက်ထုတ်ပြီး အနှေးနဲ့ အမြန် ကာကွယ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းရှိပါတယ်”ဟု ဒေါ်ညိုညိုသင်းက ပြောသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရွှေရွှေစိန်လတ်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်ညိုညိုသင်းနှင့် Info Digest Journal မှ အယ်ဒီတာ ဦးဟန်ဇော်တို့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
FMI ကုမ္ပဏီလီမိတက် စင်ကာပူစတော့အိတ်ချိန်းတွင် ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် မြန်မာကုမ??
ကျောက်စိမ်း အရိုင်းတုံးများ သယ်ဆောင်လာသည့် ယာဉ်ကို ဖားကန့်-ကာမိုင်းလမ်းကြောင်း၌ ဖမ်းဆီးရမ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် နောက် ၇၂နာရီအတွင်း လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်
ဥရောပ ထိပ်တန်းလိဂ် ငါးခု၏ နေရာအလိုက် အကောင်းဆုံး စာရင်းတွင် လိုရစ်နှင့် အဲရစ်ဆင်တို့ပါဝင်
ကချင်တိုက်ပွဲများကြား ပိတ်မိပြည်သူ ၁၅ဝ ကျော်ကို အစိုးရ ဦးဆောင် ကယ်ထုတ်